Kukuziphi izimo lapho amakhithi osizo lokuqala esetshenziswa kakhulu?
Izinhlekelele nezingozi emphakathini wanamuhla kwenzeka kakhulu ezakhiweni zamahhovisi, ezindlini zokuhlala, ezinxanxatheleni zezitolo ezinkulu, kwezokuthutha nasekukhiqizeni amabhizinisi. Okokusebenza okuphuthumayo kanye nezinhlelo zalezi zindawo ezinabantu abaningi zidinga ukuhlonyiswa ngokucophelela nokwakhiwa. Ukuze ongaphandle, The en ...
Umehluko phakathi kwe-sphygmomanometer ye-elekthronikhi yezokwelapha ne-sphygmomanometer yasendlini
Ukubuka konke kwe-sphygmomanometer ye-elekthronikhi I-electronic sphygmomanometer iyithuluzi lezokwelapha elisebenzisa ubuchwepheshe besimanje be-elektroniki kanye nomgomo wokulinganisa okungaqondile kwegazi ukukala umfutho wegazi. Isakhiwo sakhiwa ikakhulukazi izinzwa zengcindezi, amaphampu omoya, isilinganiso sokulinganisa ...
Mayelana namathiphu we-laboratory pipette, kufanele wazi.
1. Sebenzisa ithiphu efanelekile: Ukuze uqinisekise ukunemba okungcono nokunemba okungcono, kunconywa ukuthi ivolumu yokufaka amapayipi ibe phakathi kobubanzi obungu-35% -100% wethiphu. 2. Ukufakwa kwamathiphu we-pipette: Kumikhiqizo eminingi yamapayipi, ikakhulukazi amapayipi eziteshi eziningi, akulula ukufaka ipayipi ...